Fanerena hiasa – Mandrahona fametraham-pialana faobe ny mpitsabo mpanampy - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fanerena hiasa – Mandrahona fametraham-pialana faobe ny mpitsabo mpanampy
Naneho ny hatezerany ny sendikan’ny mpitsabo mpanampy omaly, taorian’ny tsy nahazoan’izy ireo rariny teo anivon’ny filankevi-panjakana, mikasika ny fanapahan-kevitra fanerana hiasa na “recquisition de service” navoakan’ny fanjakana. Mety ho tonga hatramin’ny fisian’ny fametraham-pialana faobe mihitsy izany fahatezeran’izy ireo izany.
« Tapaka tamin’ny fivorian’ny mpitsabo mpanampy manerana ny Nosy, fa aleo manao fametraham-pialana faobe toy izay terena hiasa. Hiroso amin’izany izahay raha vao misy fanapahana karama », hoy Rakotondrazafy Aimé, filohan’ny sendikan’ny mpitsabo mpanampy. « Tsy mbola tokony hihatra ny « réqusition » satria izahay manana 15 andro ahafahana mangataka fanafoanana ny didy araka ny lalàna misy », hoy kosa Rakotonandrasana Valérien, avy amin’ny mpitsabo mpanampy ihany.
Ny tompon’andraikitra iray teo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamana anefa toa nanamafy ny fampiharana io fanapahan-kevitra fanerena hiasa io avy hatrany. « Mbola iny tenin’ny minisitra tamin’ny 09 jolay iny ihany aloha hatreto no manan-kery », hoy iry tompon’andraikitra iry. Milaza ny amin’ny tokony handraisana fepetra ho an’ireo manao fitokonana lavareny no votoatin’izany tenin’ny minisitry ny Fahasalamana izany.
Ireo sendika kosa manizingizina fa tsy misy fanohintohinana ny marary mihitsy ny fitakian’izy ireo ary fitakiana tena sendikaly. « Matoa izahay mbola manatanteraka ny fiandrasan-draharaha dia mbola manaja ny asanay », hoy hatrany Rakotonandrasana Valérein.
Mpitsabo mpanampy, Mpanoratra Rijakely, 20.07.2012, 09:13	FIARAHAMONINA